Geofumadas: Amụma 2010: GIS Software - Geofumadas
Disemba, 2009 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Cadcorp, Google Earth / Maps, GvSIG, manifold GIS, Microstation-Bentley, My egeomates, qgis, uDig
Ogologo oge ole na ole gara aga, na ụzụ nke kọfị kọfị nke nne di m mere anyị na-eme ụfọdụ echiche banyere ọnọdụ ndị edobere maka 2010 na mpaghara ịntanetị. N'ihe banyere gburugburu ebe obibi, ọnọdụ ahụ dị ezigbo iche (ọ bụghị ikwu okwu na-agwụ ike), ọtụtụ n'ime nke a na-ekwuworị na okwu okwu ahụ site na nnukwu ụdị, ma ọ bụghị iji kpochapụ kọfị kọfị n'oge a na ihe ndekọ nke njedebe afọ, ebe a na-aga.
Ngwadogwu ahia (obughi n'efu): Obere akuko. Ọnọdụ dị n'agbata ESRI, Bentley na AutoDesk yiri ka ọ dị iche, (ọ dịkarịa ala na gburugburu ebe obibi Hispanic) nakwa maka ihe ọhụrụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ise na ihe ọhụrụ nke xml na mmekọrịta ya na ụkpụrụ OGC kwụsịrị ịghọ ihe ijuanya.
A ga-ekwukwa ọtụtụ ihe, ime ka ikike mmezi ngwa ngwa dị na GIS na nhụpụ anya na CAD bụ nsogbu na-aga ogologo oge.
Ya mere, n'okwu nke AutoDesk, ihe kachasị anyị ga - ahụ bụ AutoCAD 2011, nke ndị mmadụ na - ejizi na -Ribbon) ma malite iji obi ụtọ nabata otú ememme ahụ si baa uru. 3D nkịtị nwere ike inye anyị ihe ịtụnanya, mana ọ bụghị ọtụtụ, ntozu oke nke ngwanrọ na nguzozi maka ịghara ime ka ndị ọrụ nwee ọtụtụ ihe nzuzu ga-adịgide. Dika anyi mara, AutoDesk adighi eme akuko di egwu na otutu oge (Hapụ, Ọ bụghị Kalinda), naanị etemeete, nke a na - emesi anyị obi ike ka anyị ga - ahụ usoro ọhụụ ọhụrụ .dwg ruo 2011 mgbe a mara ọkwa AutoCAD 2012.
Ọ bụrụ na Bentley Anyị ga-ahụ ihe ndị ọzọ na-abaghị uru, ma ọ bụ naanị n'ókè nke ịṅụ sịga. M-nlereanya N'oge a ọ ga-emetụta Project Wise na Publisher, yana na ọkwa a tụrụ aro, n'ihi na n'echiche m Bentley na-achọ iji nwetaghachi uru agbakwunyere site na Họrọ ma kesaa XFM, nke ọ na-ezube na ọkara oge anyị agaghị ahụ na 2010. Ikekwe maka afọ a ka anyị lelee mmejuputa nke mbụ nke Bentley Hotels na-ekere òkè na Nwee ume, ee, ka a ga-esi na-ese anwụrụ ọkụ, nke m nwere ihe atọ dị ntakịrị nke m na-ahọrọ ka m ghara ikpughe.
Maka ESRI Enweghị m ntakịrị echiche nke ihe anyị nwere ike ịtụ anya ya, Ntughari 9.4?, Agbaghara m ya. Maka akụrụngwa nwere ọkwa dị (n'ọrịre na ịpụ apụ) o siri ike iche na ị nwere ike tozuru etozu, n'agbanyeghị na ndị enyi oghe imeghe nwere ya na mgbidi nke Macondo.
Na usoro nke manifold GIS ọ ga - abụ oke iwe, ikekwe tupu June anyị ga - ahụ Manifold 9. Na ntakịrị ihe anyị gụrụ na akwụkwọ ikike magisterial nke Dimitry tọhapụrụ, achọpụtara m na m ga - CUDA ma nọgide na-amanye ndị mmadụ na ibe 64, nke bụ ihe ha kpọrọ ọsọ. Ihe ihere, n'ihi na ogologo oge ndị a kwesịrị ịbanye na nkwekọrịta na ndị dị ukwuu, ma ọ dịkarịa ala na usoro nke dwg na dgn nke nọgidere na-arịọ arịrịọ ka a kwadoro na ihe ha na-eme bụ nke na-agbagha n'etiti eziokwu na ihe ọjọọ.
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla a ga-atụ anya site na Manifold bụ na ndị enyi a ee na anwụrụ ọkụ nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, Ọ gaghị eju anyị anya ma ọ bụrụ na ha agbakwunye ọtụtụ ọrụ nzuzu ndị ọzọ na-egwuri egwu, nke obere nke nta na-emeziwanye ọnọdụ ya ma e jiri ya tụnyere ndị ukwu. Mana n'uche m, anyị ga-ahụ ndị nzuzu karịa na nchekwa data na mmekọrịta mmekọrịta, obere na ogo na mmezi vector.
Open iyi: Na-achọ nkwado. Onweghi onye kwuru na nke a abụghị azụmaahịa, usoro free ma ghara n'efu ha zuru ezu iji kewaa ngalaba.
Mere ekele, ma n'echiche m, gvSIG na mbipụta ya 1.9 anụ ọkụ nọgide na-edozi obere chin ma mepụta njikọta nke ga-enye gị nkwado na nhazi. Okwu a yiri ihe gbagwojuru anya, ọ bụrụ na anyị enye ndị ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze okwu ahụ, ọ masịrị m mma karịa ka ndị agronomists si akọwa ya:
ụfọdụ osisi anaghị abụ oké ọhịa, n'ihi na ọ ga-abụrịrị ebe dị mma na ebe a ga-ewere ya na ọ ga-adịgide adịgide.
Ọ bụrụ na gvSIGỌ ga-agbaso njikọ ndị ahụ nke ọ bidoro na Europe, ime nke Spain na Latin America. Otu ihe kpatara ya: onye ga-enye ọhụụ dị ka Windows 7 ma ọ bụrụ na Generalitat enweghị mmasị na-aga n'ihu Don Bill Gates, ma ọ bụ puku puku flavors ndị dị na nchekwa Linux. Maka nke a, ịkwesịrị ịmepụta ihe jikọrọ njikọta na ntanetị: agụmakwụkwọ, ngalaba nkeonwe, ngalaba ọha, nke nwere ike ịdị njikere maka mgbe anyị hụrụ ihe site na gvSIG 2.0.
Ihe banyere ọrụ nke ime ihe dika osGeo, FIG y Mepee GIS Consortium, a na-atụ anya na ha ga-aga n'ihu ịkwaga n'ala n'ala ugbo ahụ, na-enwe ihe nnọchiteanya dị ukwuu nke obodo Hispanic ma kwado ihe ọ bụla. free ma ghara n'efu.
Ndị ọzọ enweghị onwe ha, o yikarịrị ka anyị ga-enwe ụdị ọhụrụ GIS nwere ike, na melite mụ nyiwe na iwekota a di na nwunye ọzọ screwdrivers. N'uche m, anyị ga ahụ obere ihe ọhụụ n'ebe ndị ọzọ nọ tozuru oke, dịka kwantum GIS, Grass na Udig; ha nwere ọtụtụ nrụgide iji wuo nkwado karịa ime mgbanwe.
Anaghị m achịpu akụkọ na-atọ ụtọ, ihe na-eme bụ na dị ka obere atụmatụ (enweghị n'efu), ikike ha nwere ịme mkpọtụ enweghị mmetụta na gburugburu ebe ndị Hispaniki. Ma ọ dịkarịa ala, ọ bụghị dị ka gvSIG, nke nwere obere ntu ọ bụla nweta olulu na-aga, usoro nke meworo ka o nwekwuo ihe eji eme ihe n'usoro karia maka uzo brad; na nke na-ewuli elu.
Ọ bụrụ na m, m ga-etinye ụfọdụ mmasị m nwere maka Software enweghị n'efu, ihe merenụ bụ na gvSIG ga-eche banyere ndị ọrụ nke ndị di ha nwụrụ, (95%) nke na-eji atụmatụ 90,000 na-enwe ngwa ngwa nke ebe Java na atumatu dị iche iche gbochiri ha ịgbanye Linux romp.
Ọzọkwa ọtụtụ nke Isi mmalite gburugburu ihe mere na MySQL, ugbu a na Ora nwere nsị zuru okè n'etiti mkpịsị aka nke abụọ na nke atọ (tinyere nke atọ). Otu ihe dị mma, n'ihi na ọtụtụ na-atụ anya ozi nzuzu na-esi na PostgreSQL na PostGIS.
Osisi ndị ọzọ: Lo enweghị atụ. Google Earth, n'echiche nke m ihe dị ka afọ atọ nwere ike ịnweta ọtụtụ akụrụngwa maka iwu na nyocha na tuo ọrụ dị iche iche na kmG na OGC. O yiri ka eziokwu nke pọọ ya na ka braca dị ka ọkọlọtọ na Consortium emepụta mkpụrụ na ihe omume ndị ọzọ, nke a ga - eme ka Google kwusi ike inye ya uru ọ kwesịrị (ha), usoro nhazi nke igodo gorilopólica. (A ghọtara nke a na mpaghara UTM 15 na 16 mpaghara tinyere mmetụta nke kọfị nwanyị a
Kedu ihe ọzọ m nwere ike ikwu, nke a bụ agbata obi nke ngwaahịa ndị dị gburugburu ebe a. Cadcorp, MapInfo na SuperGIS si agbata obi ọzọ, nke a na-edebekwa post na myopia nke ala ugbo.
Previous Post«Previous Bentley Cadasatre: esemokwu na Bentley Map na Ike Map
Next Post Geofumed: 48 ojii na ọchaNext »